I-Piwik kunye neGoogle Analytics: Izibonelelo ze-On-Premise Analytics | Martech Zone
I-Piwik kunye neGoogle Analytics: Izibonelelo zeOnline Premise Analytics
NgeCawa, Meyi 15, 2016 NgeCawa, Meyi 15, 2016 Douglas Karr
Sinomthengi esacebisa uPiwik kuye. Babebalekela kwimicimbi enzima yokuxela kunye noGoogle Analytics kunye neshishini elihlawulwayo kubahlalutyi ngenxa yevolumu yeendwendwe ababefika kwindawo yabo. Iindawo ezinkulu aziqondi ukuba zikho zombini Imiba yokubambezeleka kunye nokusikelwa umda kwedatha ngeGoogle Analytics.
Umthengi uneqela lewebhu elinetalente kakhulu ngokuthatha kubahlalutyi Ngaphakathi bekuya kuba lula. Kunye nokuguquguquka ukwenza ngokwezifiso ngokusekwe kwiqonga labo, iqela lentengiso liya kubonelelwa ngokuchanekileyo kubahlalutyi, ngexesha langempela, ngaphandle kweempazamo zeenkcukacha-manani esekwe kwi isampulu yeendwendwe.
Ukuba uziva ulinganiselwe nguGoogle Analytics, Piwik isenokuba yenye indlela ebalaseleyo Uluntu lwasePiwik edition ngumthombo ovulekileyo kubahlalutyi Isixhobo esiza nohlaziyo oluqhelekileyo kunye nokukhutshwa okutsha simahla. IPiwik PRO kwiNdawo kubandakanya izinto ezahlukeneyo kunye neenkonzo zepremiyamu. IPiwik PRO ikwabonelela nge- isisombululo sefu (apho usenayo idatha) ukuba awukwazanga ukuyisingatha ngaphakathi. IPiwik igcwele Ukuthelekiswa kwesisombululo ngasinye kwindawo yabo.
Khuphela uthelekiso olupheleleyo
U-Piwik ukhuphe i-infographic ngazo zonke izibonelelo abazibonisayo ngaphezulu kohlalutyo lukaGoogle. Kuyavunywa, oku kukukhuphela infographic. Uhlalutyo lukaGoogle luyabonelela UGoogle Analytics 360 yomthengi weshishini. Kwaye akufuneki ihambe ngaphandle kokukhankanya ukuba uGoogle unelungelo lokudityaniswa kweWebmaster kunye neAdwords umboneleli owahlukileyo angaze anikezele
Iimpawu zePiwik PRO
I-Piwik ibandakanya zonke iingxelo zamanani asemgangathweni: amagama aphambili kunye neinjini zokukhangela, iiwebhusayithi, ii-URL zekhasi eziphezulu, izihloko zamaphepha, amazwe abasebenzisi, ababoneleli, inkqubo yokusebenza, isabelo sentengiso yesikhangeli, isisombululo sesikrini, iselfowuni yeVS mobile, ukuzibandakanya (ixesha kwindawo, amaphepha ngotyelelo ngalunye , utyelelo oluphindaphindiweyo), imikhankaso ephezulu, ukuguquguquka kwesiko, ukungena okuphezulu / ukuphuma kwamaphepha, iifayile ezikhutshelweyo, kunye nezinye ezininzi, ezahlulwe zangundoqo ezine kubahlalutyi iindidi zengxelo-AbaTyeleli, iZenzo, abaThumeli, iiNjongo / i-e-Commerce (iingxelo ezingama-30 +). Yabona Uluhlu olupheleleyo lweempawu zikaPiwik.
Uhlaziyo lwedatha yokwenyani -Jonga ukuhamba kwexesha lokwenyani kwiwebhusayithi yakho. Fumana umbono ocacileyo weendwendwe zakho, amaphepha abebetyelele kunye neenjongo abazenzileyo.
Idashboard enokwenziwa ngokwezifiso -Yila iideshibhodi ezintsha ngolungelelwaniso lwewijethi kwiimfuno zakho.
Zonke iiDashboard zeWebhusayithi - eyona ndlela yokufumana ukujonga ngokubanzi okwenzekayo kuzo zonke iiwebhusayithi zakho ngaxeshanye.
Uluhlu lweNdaleko Idatha yangoku neyedlulileyo yemetriki yawo nawuphi na umqolo nakuyiphi na ingxelo.
Uhlalutyo lwe-e-yorhwebo -Qonda kwaye uphucule umbulelo kwishishini lakho kwi-intanethi e-commerce kubahlalutyi Iimbonakalo.
Ukulandela umkhondo kwinjongo -Landa iinjongo zakho kwaye uchonge ukuba uyazifezekisa na iinjongo zakho zeshishini.
Ukulandelwa Kwemicimbi Linganisa naluphi na unxibelelwano ngabasebenzisi kwiiwebhusayithi zakho kunye neeapps.
Umkhondo wokuKhangela -Linganisa ukubonakala kunye nokucofa kunye ne-CTR yeefowuni zemifanekiso, iibhena ezibhaliweyo kunye nayiphi na into kumaphepha akho.
Uphengululo lweSiza -Ukulandelela ukukhangela okwenziwe kwiinjini yokukhangela yangaphakathi.
Imilinganiselo yesiqhelo -Nika nayiphi na idatha yesiko kubakhenkethi okanye kwizenzo zakho (njengamaphepha, iminyhadala,…) kwaye ujonge iingxelo zokuba zingaphi iindwendwe, uguqulo, ukujonga iphepha, njl. Njl.
I Geolocation -Beka iindwendwe zakho ekufumaneni ngokuchanekileyo ilizwe, uMmandla, isiXeko, uMbutho. Jonga amanani abatyeleli kwiMephu yeLizwe ngeLizwe, uMmandla, isiXeko. Jonga iindwendwe zakho zamva nje ngexesha lokwenyani.
Utshintsho lwamaPhepha -Jonga okwenziwe ziindwendwe ngaphambi nasemva kokubukela iphepha elithile.
Ukuwaleka iphepha -Bonisa amanani ngokuthe ngqo ngaphezulu kwewebhusayithi yakho kunye nokugqume ngobulumko.
Iingxelo zesantya kunye nephepha -Ugcina umkhondo wokuba ngokukhawuleza iwebhusayithi yakho ihambisa umxholo kubakhenkethi bakho.
Landa umkhondo wentsebenzo yomsebenzisi eyahlukeneyo -Ukulandelwa ngokuzenzekelayo kweefayile ezikhutshelweyo, ukucofa kwiikhonkco zangaphandle zewebhusayithi, kunye nokulandela umkhondo wephepha lama-404.
Ukulandelela umkhankaso wohlalutyo -Ukubhaqa ngokuzenzekelayo iparameter yomkhankaso weGoogle yokuhlaziya kwii-URL zakho.
Landa umkhondo wezithuthi kwiinjini zokukhangela -Zingaphezu kwe-800 iinjini zokukhangela ezahlukeneyo ezilandelelweyo!
Iingxelo ze-imeyile ezicwangcisiweyo (iingxelo zePDF kunye ne-HTML) -Faka iingxelo kwi-app yakho okanye kwiwebhusayithi yakho (ezingama-40 + iiwijethi ezikhoyo) okanye faka iigrafu zePNG kulo naliphi na iphepha lesiko, i-imeyile, okanye usetyenziso.
Izichaso -Yila amanqaku okubhaliweyo kwiigrafu zakho, ukuze ukhumbule ngeziganeko ezithile.
Akukho mda wedatha -Ungayigcina yonke idatha yakho, ngaphandle kwemida yokugcina, ngonaphakade!
Unxibelelaniso -Ngaphezulu kwe-40 CMS, izikhokelo zewebhu okanye iivenkile zeEcommerce
Uhlalutyo losetyenziso lweSelfowni nge-Piwik iOS SDK, i-Android SDK, kunye neModyuli yeTitanium.
tags: enye indlela yokuhlaziya kuGoogleuhlalutyo apiidatha yohlalutyoukusikelwa umda kuhlalutyoanalytics ebanjweUhlalutyo kwisisekoPiwikilifu le-piwikpiwik yoluntuIprowik propiwik kuthelekiswa gai-piwik xa ithelekiswa nohlalutyo lukaGooglei-piwik vs gai-piwik vs google uhlalutyoUhlalutyo lwexesha lokwenyaniUhlalutyo lweelebheli ezimhlophe
AmaQonga ama-Ecommerce akhawulezayo kwiDesktop nakwiselfowuni
Yakha ubudlelwane obuDibeneyo noMthengi noMxholo woMgangatho